Nsogbu ọhụrụ maka Apple Watch Series 3 | Akụkọ akụrụngwa
Nsogbu ọhụrụ maka Apple Watch Series 3
O yiri ka Apple Watch Series 3, nke atọ nke Apple Watch, adabaghị ahịa na ụkwụ aka nri, ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ ihe anyị nwere ike ịkọ site na akụkọ metụtara arụmọrụ ya ma ọ bụ nsogbu njikọ ọ na-enye. N'oge nyocha ndị mbụ, ọtụtụ bụ ndị mgbasa ozi nke kwadoro na Apple Watch Series 3 na njikọ LTE na-achọ netwọk ikuku iji jikọọ, ọ bụ ezie na ọ nweghị onye ọ bụla hụrụ na nso ya, nke mere ka batrị ngwaọrụ ahụ daa nke ọma.na na ọ ga- enweghị ike iji ya rụọ ọrụ site na ịmeghị njikọ njikọ data nke ọ na-eme. Nsogbu ọhụrụ, Oge a ka ọ na-emetụta usoro 3 na-enweghị LTE, kpọmkwem ihuenyo ahụ.
Nsogbu ohuru nke ndị ọrụ Apple Watch Series 3 na-ata ahụhụ oge a na-emetụta ihuenyo ya, ebe ụfọdụ ọnya na-apụta na nsọtụ ihuenyo ahụ mgbe anyị gbanyụrụ ngwaọrụ na mgbe a na-ahụkarị ya bụ mgbe ọkụ na-enye ya ozugbo. N'adịghị ka nsogbu ahụ metụtara ụdị ndị ahụ na njikọ LTE, maka ugbu a ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na-azọrọ na-egosi nsogbu a dị obere, na Apple anaghị enye ụdị nsogbu ọ bụla nye ndị ọrụ niile na-arịa ya.
Dị ka 9to5Mac si kọọ, usoro nkwenye mbụ nke ndị ọkachamara Apple Store mere kpoo mkpịsị aka gị n'akụkụ ebe ihuenyo ahụ, iji hụ ma ahịrị ndị ahụ ọ ga-apụ n'anya. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ndị ọrụ Apple na-arịọ onye ọrụ ka ọ kuo ume na iko iji hụ ma nsogbu ahụ ọ dị ọ nwere ike ịbụ n'ihi iru mmiri. N'oge niile, dị ka ọtụtụ ndị ọrụ kọọrọ webụsaịtị a, ọnyá ndị a anaghị akwụsị, n'ihi ya, a manyere ụlọ ọrụ Cupertino ka ọ dochie ọdụ ndị nsogbu a metụtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Nsogbu ọhụrụ maka Apple Watch Series 3
Anyị ejiri ụjọ na enweghị ndidi na PSVR Psychiatric
Ekwentị Razer, nke a bụ ụlọ ọrụ ama ama egwu egwu ama ama